Feno hafaliana i Moramanga nandray ny Eveka vaovao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tonga soa e. Noraisina an-kafaliana tao Moramanga araka ny fotoana efa voalahatra i Mgr Rosario Vella izay notendren'ny Papa Ray Masina hiasa sy honina ao Moramanga. Herintaona sy telo volana no tsy nisy eveka ny diosezin'i Moramanga.
Tsiahivina fa Mgr Gaetano di Pierro no niasa teo alohany ary niasa nandritra ny 13 taona. Izy rahateo no eveka nanokatra ny diosezy. Anisan'ireo zava-bitan'i Mgr Gaetano di Pierro ny fanorenana trano fiangonana, fampidirana ireo relijiozy hiasa eny anivon’ny ny boka ny jamba sy manana kilema hafa, miasa eny anivon’ny mahantra... Najoro ny toeram-panofanana sy fanomanana ho pretra.
Nandritra ny,fihaonan'i SE Mgr Gaetano Di Pierro tamin'ireo kristianina tato anatin'ny diosezy ny asabotsy 14 septambra 2019 no naneho fankasitrahana azy ireo kristianina. Naranty an-tsary avokoa ireo fitsidihana nataony. Na teo aza ireo betsaka vitany dia nilaza izy maro ireo asa miandry ny Eveka vaovao.
Raha nandray fitenana kosa i Mgr Rosario Vella dia nanambara fa vonona hanohy ireo asa efa natomboky ny Eveka teo alohany izy ary misaotra azy nahavita be. Natsidiny fa hijery akaiky ny ankizy sy ny tanora ary ny sembana izy, eo koa ny renim-pianakaviana misedra fahasahiranana.
Ny 5 mey 1991 no nandalo farany teto Moramanga i Mgr Rosario Vella dia izao izy voatendry hiasa eto izao. Tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny toeram-pampiofanana ho pretra eto Madagasikara izy izao hiasa eto Moramanga izao.
Italianina i Mgr Rosario Vella. Tamin’ny taona 1979 izy no nohamasinina ho pretra. Tonga teto Madagasikara ny taona 1981. Efa niandraikitra ny asa maha pretra mpiandraikitra faritany (curé ) maromaro toy ny tany Ankililaoka.
Tsapa ho feno hafaliana ny kristianina nandray ny Eveka vaovao. Feno hafaliana na teo aza ny tsy maintsy nisarahana tamin'i Mgr Gaetano di Pierro, eveka voalohany nanokatra ny diosezin'i Moramanga.